Iindaba zeBuasas - Abenzi be-Anabolics Steroids
Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) yoKwakha
Yintoni u-Anavar (Oxandrolone)? I-Oxandrolone (i-53-39-4), ithengiswa phantsi kwegama elithi brand Oxandrin kunye no-Anavar, phakathi kwabanye, iyeza ye-androgen ne-anabolic steroid (AAS) esetyenziswa ekuncediseni ukuzuza ubunzima kwiimeko ezahlukahlukeneyo, ukukunceda ukukhupha iiprotheni ze-catabolism ezibangelwa i-corticosteroid yexesha elide, ukuxhasa ukubuyiswa kokutshisa okukhulu, ukunyanga iintlungu zethambo ezinxulumene ne-osteoporosis, ukunceda ekuphuhliseni ...
I-Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Yiyiphi iWins?)
Yintoni i-trenbolone enanthate? Yaye i sebenza njani? I-tanbolone enanthate (10161-35-8) kunye ne-Trenbolone acetate (10161-34-9) zimbini zezonabolic androgenic steroids ezisetyenziswa kakhulu. I-Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate iziphumo ziphantse zifana. Ukwahluka kuza nexesha elowo kuthatha ukukhupha isiseko seTrenbolone esebenzayo. Nangona zivakala ngandlela-thile zifana, iTrenbolone Enanthate kunye ...
I-Masteron Propionate okanye i-Masteron Inanthate? Ngubani na ongcono kuwe?
Yintoni i-Masteron Propionate (Drostanolone Propionate)? I-Masteron Propionate (i-521-12-0) kunye ne-Masteron Inanthate (472-61-1) ziyi-varion ye-Masteron kunye nomncinci omncinci. Zinto zombini zijojo kwaye ziqheleke phakathi kwabakhi bomzimba. Uhlobo oluphambili phakathi kwala mabini lulawulo lokulinganisa kunye nobomi babo. Umthamo we-Masteron Propionate uncinci kodwa unikezelwa imihla yonke ekubeni isilwanyana sisebenza ngokukhawuleza kwaye siphume ...